Friday, July 03, 2015 wahgyi No comments
ပုံ ဘယ်လိုဘယ်လိုဆွဲရတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့ Android Application ပါ ။
Pls click and download below link
Android ဖုန်း မှာ ပန်းချီဆွဲမယ် ။
ပန်းချီ ဝါသနာရှင်တွေ အတွက် အသုံးတည့်မယ် ထင်တဲ့
Android ဖုန်းမှာ သုံးရသော Application.
Pls download below link.
Paperless-Draw, sketch, tablet v1.1.7 Apk - 26 MB
How to Jailbreak iOS 8.4 Using PP Jailbreak
iOS 8.1.3 – 8.4 အထိ idevices များကို
Chinese iOS Hacker Team ကနေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့
PP Jailbreak 2.3 ထွက်ရှိလာပါပြီ ။
အခုက Windows Version အတွက်ပါ ။
Be sure to close the “Find My iPhone” in Settings -> iCloud before jailbreaking. Also turn off Touch and password in Settings -> Touch ID and password -> Turn off password.
Jailbreak ပြုလုပ်လိုတဲ့ သင့်ရဲ့ iPhone/Pad/Pod touch မှာ
Find My iPhone ကို off ထားပါ ။
Airplane mode ကို on ထားပါ ။
passcode ကို off ထားပါ ။
iPhone/Pad/Pod touch နဲ့ ကွန်ပျူတာကို USB Cable ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ ။
ကွန်ပျူတာတွင် iTunes ကိုဖွင့်ထားပါ ။
ကွန်ပျူတာက iTunes မှာပေါ်နေပါစေ ။
Download PP Jailbreak from above link.
အရင်ဆုံး PP Jailbreak Tool ကို အောက်ပါ Download Link မှ ရယူပါ ။
PP Jailbreak tools
PP Jailbreak 46.27 MB
Open the exe file and tap on the blue button to start installing the jailbreak tool.
Download ရယူထားတဲ့ PP Jailbreak Tool ကိုဖွင့်ပါ ။
Still click on the blue button to complete the installation.
အပြာရောင်အမှန်ခြစ်သင်္ကေတလေးနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင် အပြာရောင်ခလုတ်လေးကိုထပ်နှိပ်ပါ ။
Open the installed jailbreak tool from your desktop.
ကွန်ပျူတာ Desktop ပေါ်မှ Jailbreak tool ကို ဖွင့်ပါ ။
Once you device is detected, click the green button located below
Jailbreak လုပ်ရမယ့် Tool နှင့် သင့် iDevice ချိတ်မိသွားပါပြီ ။
Click the button below to start jailbreaking.
ပုံတွင်ပြထားသော အမှန်ခြစ် လေးအားဖြုတ်ပါ ။
ပြီးလျှင် အောက်မှ ခလုပ်အား နှိပ်ပါ ။
clicking the button on the right
ပုံတွင်ပြထားသော ခလုတ် ၂ တွင် ညာဘက်မှ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
The jailbreak process will begin, which will take several minutes,
please wait until it completed.
Jailbreak စတင်လုပ်ဆောင် နေသောကြောင့် မိနစ်အနည်းအငယ် စောင့်ပါ ။
ပြီးလျှင် သင် ၏ iDevice့ တွင် Restore in Progress ပေါ်လာပါမယ် ။
ခဏကြာလျှင် Reboot ဖြစ်ပါမည် ။
Done, your device has been jailbroken on iOS 8.4 untethered.
ကွန်ပျူတာပေါ်မှ PP Jailbreak Tool သည်
Jailbreak လုပ်တာအောင်မြင်ကြောင်း Message ပေါ်လာပါမည်။
Huawei 730 C နဲ့ G Handset ကို G နဲ့ G ပြောင်း သုံးမယ် ။
Thursday, July 02, 2015 wahgyi No comments
Huawei 730 C နဲ့ G Handset ကို G နဲ့ G ပြောင်း သုံး ချင်ရင်
၁ ။ Roaming Setting.Apk ကို Download ဆွဲပီး Install တင်​ပါ ။
၂ ။ CDMA Sim Card ​နေရာမှာ GSM Sim Card ကိုထည့်​ပါ ။
၃ ။ Roaming Setting Apk ကိုဖွင့်​ပါ ။
Card One ကိုအမှန်​​လေးခြစ်​ပီး Open ​ပေးလိုက်​ပါ ။
Card One Open ပြီးလို့ ဖုန်းတိုင်​တက်​မလာလျှင်
ဖုန်းကို Restart ချ​ပေးလိုက်​ပါ ။
How to change language in China Mobile Phone
Thursday, June 04, 2015 wahgyi No comments
China Android Mobile Phone မှာ Language ပြောင်း ချင် တယ် ဆို ရင်
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို လုပ်ပေးရင်းနဲ့ 
နောက် သိချင်သောသူများပါ အဆင်ပြေအောင်ပါ ။
Samsung Galaxy Note3 ကို Root လုပ်မယ် ။
Saturday, November 30, 2013 wahgyi No comments
ယ္ခု Post အား မောင်မင်းသိန်း ( ရန်ကုန် ) Web စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် Share ထားပါသည် ။
ဖုန်းလည်းဟုတ်၊ tablet လည်းဟုတ်တဲ့ Phablet(အပြားကြီးကြီးဖုန်း) တွေကို ခုခေတ် နောက်ပိုင်း တော်တော်လေး အသုံးပြုလာ ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ တောင်ကိုးရီးယားအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung က နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Galaxy Note3ဟာလည်း နာမည်ကြီးတစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ဟာ ဒီလို ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများစွာကို ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီထဲကမှ Note3ဟာလည်း တစ်ခုပေါ့။
Note3မှာတော့ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ Hardware နဲ့ Software စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေ ပါဝင် လာပါတယ်။
သည်းခြေအိတ် တွင် ကျောက်တည်ခြင်း အတွက်ကုထုံး ။
Thursday, July 11, 2013 wahgyi No comments
သည်းခြေအိတ် တွင် ကျောက်တည်ခြင်း အတွက်ကုသနည်း
Dr.Lai Chiu-Nam ၏ ဆေးနည်းဖြစ်ပါသည် ။
သည်းခြေကျောက်တည်သော ရောဂါ၏ လက္ခဏာ တစ်ခုမှာ
အစာကိုများများ စားပြီးနောက် ဝမ်းဗိုက်ပြည့်တင်း ဖေါင်းကားလာသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်းဖြစ်တတ်သည် ။
အစာမကျေ သကဲ့သို့ လည်းခံစားရပါသည် ။ ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာပါက
အသည်းနေရာ တဝိုက်တွင် နာကျင်မှု့ ကို ခံစားရပါမည် ။
ဘယ်လို ကုရမလဲ ?
၁ ။ ပထမ ( ၅ ) ရက်တွင် နေ့ စဉ် ပန်းသီး ဖျော်ရည် ( ၄ ) ခွက် သောက်ပါ ။
(သို့ မဟုတ်) ပန်းသီး လေး ၊ ငါးလုံး စားပါ ။
တရုတ်ပြည်မှ ဝင်သော အခွံနီ ပန်းသီးအကြီး ဖြစ်ပါသည် ။
အစိတ်သေးသေးစိတ်၍ မနက် ၂ လုံး ၊ နေ့ လည် ၂ လုံး ၊ ည ၁ လုံး စားနိုင်ပါသည် ။
*** ပန်းသီးရည်သည် သည်းခြေကျောက်များကို ပျော့စေနိုင်ပါသည် ။ ***
၂ ။ ၆ ရက်မြောက်သောနေ့ တွင် ညစာ မစားဘဲနေပါ ။
၃ ။ ထိုနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင် ဆားခါး
( Epsom salt ) ( MgSo4 ) တစ်ဇွန်းကို ရေနွေး တစ်ဖန်ခွက် နှင့်သောက်ပါ ။
၄ ။ ည ( ၈ ) နာရီ တွင် အထက်ပါအတိုင်း ဆားခါး တစ်ဇွန်း ထပ်သောက်ပါ ။
*** ဆားခါးသည် သည်းခြေအိပ်ပြွန်များကို ပွင့်စေပါသည် ။ ***
၅ ။ ည ( ၁၀ ) နာရီတွင် သံလွင်ဆီ ( သို့ ) နှမ်းဆီ ပန်းဂံလုံး တစ်ဝက် ကို
လတ်ဆတ်သော သံပုရာရည် ပန်ဂံလုံး တစ်ဝက် နှင့် သေချာစွာ ရောမွှေပြီးမှ သောက်ပါ ။
*** ဆီ သည် သည်းခြေကျောက်များကို ချောမွေ့ စွာ ထွက်စေနိုင်ပါသည် ။ ***
ပန်းဂံလုံး တစ်လုံးစာ = ၂၅၀ မီလီ လီတာ
နောက်တစ်နေ့ဝမ်းသွားသောအခါ ဝမ်းထဲတွင် အစိမ်းရောင်ကျောက်များကို တွေ့ ရပါမည် ။
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းသည့် ရောဂါရှိသူများ အတွက်ဆေးနည်းကောင်း ။
Friday, July 05, 2013 wahgyi No comments
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းသည့် ရောဂါရှိသူများ အတွက်
ယ္ခုပြောပြမယ့် အိမ်တွင်းဆေး လေးကို သောက်ကြည့်ပါ ။
၃ လ ခန့် သောက်ပြီးလျှင် အချို့ သော By-Pass Surgery လုပ်ရန် လိုအပ်သူများ သည်
By-Pass Surgery လုပ်ရန်မလိုဘဲ ကောင်းမွန်သွားသည်မှာ
နီးစပ်ရာ ဝေဒနာရှင်များ လက်တွေ့ ဖြစ်ပါသည် ။
ငွေကုန် ကြေးကျ သိပ်မများ၍ လူတိုင်းတတ်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည် ။
Side Effect အန္တရယ် ဖြစ်မှာ ကိုလဲ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ ။
ဘယ်လို လူတွေသောက်သင့်သလဲ ?
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းသည့် သူများ ၊
နှလုံးသွေးကြောချဲ့ ရန် လိုအပ်သည့်သူများ ၊
နှလုံးသွေးကြောချဲ့ ရန် လိုအပ်ပြီး အခြားသောရောဂါများကြောင့်
Angiography or By-Pass Surgery လုပ်ရန်မလွယ်ကူသောသူများ ။
ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ ?
ဆေးဖေါ်စပ်ရာတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများမှာ ---
ရှောက်သီး ၊ ဂျင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ပန်းသီးမှထုတ်လုပ်ထားသော ရှာလကာရည် (Apple Cider Vinegar ) နှင့် ပျားရည်စစ်စစ် ။
ရှောက်သီးကို အရည်ညှစ် ရပါမယ် ။
ဂျင်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ ကို လဲ အရည်ညှစ်ရပါမယ် ။ Blender ရှိရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ။
မရှိလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး ၊ သေသေချာချာ ညက်အောင်ထောင်းလို့ ရပါတယ် ။
Apple Cider Vinegar ( ပန်းသီးမှထုတ်လုပ်ထားသော ရှာလကာရည် ) ကိုတော့ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်
City Mart ဆိုင်တိုင်းမှာ ဝယ်လို့ ရပါတယ် ။ ၁ ပုလင်းမှ ကျပ် သုံး ၊ လေး ထောင်ဝန်းကျင်ပါ ။
ဘယ်လို ဖေါ်စပ်ရမှာလဲ ?
၁ ။ ရှောက်ရေ အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၁ ) လုံး
၂ ။ ဂျင်းရေ အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၁ ) လုံး
၃ ။ ကြက်သွန်ဖြူ အရေ အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၁ ) လုံး
၄ ။ Apple Cider Vinegar အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၁ ) လုံး
အပေါ်က ပစ္စည်း ( ၄ ) မျိုးကို အိုးအသေးတစ်ခုထဲထည့်ပါ ။
မီးဖိုပေါ်တွင် မီးအေးအေးဖြင့် အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၃ ) ခွက်စာရသည်အထိကြိုပါ ။
( ခန့် မှန်းခြေ မိနစ် ၆၀ ခန့် ကြာပါတယ် )
အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၃ ) ခွက်စာ ရပြီ ဆိုလျှင် အအေးခံပါ ။
အေးသွားလျှင် ပျားရည်စစ်စစ် အကြမ်းပုဂံလုံး ( ၃ ) ခွက် နှင့် ရောမွှေပါ ။
ပြီးလျှင် ပုလင်းသန့် သန့် ထဲသို့ ပြောင်းထည့်လို့ ရပါပြီ ။
ထိုပုလင်းကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်လည်းထည့်ထားလို့ ရပါသည် ။
နေ့ စဉ်သောက်ရန် နံနက်စာ မစားခင် ( Before Breakfast ) ထ္မင်းစားဇွန်း နှင့် ( ၁ ) ဇွန်း ။
ဆေးသောက်ပြီး ၄၅ မိနစ် လောက်မှ နံနက်စာ ( Before Breakfast ) စားလျှင် ပိုကောင်းပါသည် ။
အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာ၍ မိမိခန္ဓာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ ။
How to transfer individual Photo Albums from iPad / iPhone to PC
Thursday, June 20, 2013 wahgyi No comments
iPad / iPhone တို့ ထဲမှာ Camera Roll ထဲက မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား Album Name ထဲက
Photo တွေကို Computer ထဲ ကူးချင်ရင် အလွယ်ဆုံး နည်းလေးပါဘဲ ။
ဒီ Software နံမည်လေးက PhotoTrans ပါ ။
မူရင်း Webpage မှာ Full version အနေနဲ့ သုံးချင်ရင် $29.99 တဲ့ ....
ပိုက်ပိုက်ပေးရမှာမို့ ညစ်သွားသလားမိတ်ဆွေ ????
ဒီမှာ အလကားပေးမှာပါ ။ ကဲ ... စိတ်ဝင်စားသွားပြီ မဟုတ်လား ??
အခု ဒီမှာ Full Version အဖြစ်သုံးလို့ ရအောင် Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ် ။
Key : RQVT-OJNW-HKDL-IAVZ-EYOG
သုံးကြည့်လိုက်ပါ ။ ကြိုက်သွားမှာပါ ...
ဒီမှာ ယူပါ ။
Ancient Myanmar Images
Tuesday, June 11, 2013 wahgyi No comments
Flickr မှာ Phokhwar sai @ thuriyasai တင်ထားတဲ့ Collection ကို ပြန် Share လုပ်ထားတာပါ ။
Huawei 730 C နဲ့ G Handset ကို G နဲ့ G ပြောင်း သုံ...